Synoptic नक्शा | नेटवर्क मौसम विज्ञान
El synoptic नक्शा (वा सिनोप्टिक चार्ट पनि भनिन्छ) भनेको समुद्री सतहमा वायुमंडलीय दबावको क्षेत्रको ग्राफिक प्रतिनिधित्व हो। ईसोबारहरू समान दबावको रेखासँग मिल्ने मौसमविद्हरूले केही hect देशको मौसम सेवाहरूमा शीर्ष hect हेक्टोपास्कलहरू (शीर्ष फोटो) र अरूमा प्रत्येक hect हेक्टोपास्कलहरू (तल्लो फोटो) कोरेका छन्। बाहेक isobars फ्रन्टल प्रणालीहरू र उच्च र कम दबाव केन्द्रहरू चार्टमा कोरिएका छन्।
अब केही आधारभूत तत्त्वहरू हेर्नुहोस् जुन Synoptic नक्शामा पहिचान गर्न सकिन्छ:
ती रेखाहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ जुन समान वातावरणीय दबावको बिन्दुहरूमा सम्मिलित हुन्छ। को मान वायुमंडलीय दबाव ती प्रत्येक लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ रेखा मा संकेत गरीन्छ। उदाहरण को लागी, कालो र सेतो नक्शा मा balearic टापु पार गर्ने isobar को मान १०२1025 Hpa हो।
2. कम दबाव केन्द्रहरू
तिनीहरू isobars को सजावट बढी वा कम गोलाकार केन्द्रको वरिपरि हुन्छ जहाँ वायुमण्डलीय दबाव हो न्यूनतम। तिनीहरू प्रायः अक्षरहरू बी (स्क्वल) वा एल (कम प्रेस) मार्फत चिह्नित हुन्छन्, टीसँग पनि। तिनीहरू सामान्यतया खराब मौसमको स्थितिमा, वर्षा र आँधीबेहरीसँग सम्बन्धित हुन्छन्।
3. उच्च दबाव केन्द्रहरू
तिनीहरू isobars को सजावट बढी वा कम गोलाकार केन्द्रको वरिपरि हुन्छ जहाँ वायुमण्डलीय दबाव हो अधिकतम। A (उच्च दबाव) वा H (उच्च प्रेस) को साथ चिह्नित। तिनीहरू सामान्यतया राम्रो मौसमको साथ सम्बन्धित हुन्छन्।
4. चिसो मोर्चा
निलोमा दांतेका रेखा द्वारा चिह्नित, तिनीहरू को समूहको अग्रिम स indicate्केत गर्दछ चिसो हावा यसको कारणले सामान्य वर्षा र तापक्रममा थोपा खेर गयो।
5. तातो मोर्चा
रातो अर्धवृत्त द्वारा रातो रेखा द्वारा रेखा द्वारा चिन्ह लगाईएको, तिनीहरू को एक समूह को अग्रिम संकेत गर्दछ न्यानो हावा यसले वर्षाको कारण गर्दछ र यसको वेकमा तापमानमा वृद्धि हुन्छ।
6. समावेश फ्रन्टहरू
तातो अगाडि र चिसो अगाडि र बैजनीको प्रतीकहरूको मिश्रण द्वारा संकेत गरिएको। तिनीहरूले लाइन को संकेत गर्दछ सामना चिसो अगाडि र तातो सामने। तिनीहरू प्राय: भारी वर्षासँग सम्बन्धित हुन्छन्।
स्रोत: Wetterzentrale, मेट अफिस
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Synoptic नक्शा
Putote, गलत जानकारी र कमबख्त मूर्ख बनाएको